Dhaamsa Bariisaa – Ethipian Press Agency
“Abbichuu nagaa nagaa qarreerra hinmarmaarinii; achittuu fayyaa nagaa qoreen sin waraaninii”. Walleen kun ummata Oromoo biratti daran beekama, jaalatamas. Artistoonni Oromoos ummatarraa fuudhuun mimmi’eessanii sirbaniiru, isa kanaafimmoo Artisti Abbabachi Daraaraa maqaa dhahuun...	Read more »
Mootummaan Itoophiyaa Ministira Muummee Doktar Abiyyiin hogganamu ummanni biyyattii ammaan tana waraana otoo hinjaalatiin ittiseenan adeemsasaa jiru. Rayyaan Ittisaa Itoophiyaa (RIB) Ministira Muummeefi Ajajaa Waliigalii Humnoota Waraanaa, Doktar Abiyyin adda waraanaatti hogganamu...	Read more »
Biyya keenya, Itoophiyaa ammaan tana hoggansa dhala Oromoo keessaa bahe, Ministira Muummee Doktar Abiyyi Ahmadiin geggeeffamaa jiru, waan toora misoomaa, araara, jaalala, tokkummaa walqixxummaarratti hundaa’eefi kkf qabattee arreedaa jirtuuf alaa keessaa qormaanni...	Read more »
Waan jedhan ykn karoorfatan hojiitti hiikuun kan beekaman Ministirri Muummee Itoophiyaa Doktar Abiyyi Ahmad Wixata darbe galgala haala wayitii sababeeffachuun mataduree, “Maqaa bilisummaa ‘Itoophiyaa’ jedhamu eegsisuuf amaanaa seenaatu nurra jira” jechuun ergaa...	Read more »
Abbaa Gadaafi Abbaa Duulaa waliin duulanii injifannoon hinshakkamu
Gareen shororkeessaa ABUT waggoota 27f ummata dararaa ture erga aangoorraa kaafamee booda aangootti deebi’ee ammas ummata biyyattii bituu, dararuufi gabroomsuuf araara didee humnaan socho’aa jira. Gareen shororkeessaa araara didee humnaan dhufe kana...	Read more »
“Tokkummaa ummataatiin awwaala Juuntaa gadi fageessina” – Jiraattota Magaalaa Amboo
Dandeettii keessoo keenyaafi misooma keenya cimsaachuun diinota keessaafi alaa injifachuun murteessaadha jedhan jiraattonni magaalaa Amboo. Biyyi keenya yeroo waraana humni juuntaafi Shaneen biyyarratti bananiifi humnoonni alaa tokko tokkos ifatti murnoota kanneen waliin...	Read more »
Milkaa’ina Itoophiyaaf lammii hundi tumsuu qaba
Yeroo Itoophiyaan amma keessa jirtu qormaataan kan guutameefi daran ulfaataadha. Biyya keessaan shororkeessaan ‘ABUT’ dirqamaan waraana keessa galcheenii duula walabummaa taasisuuf dirqamtee jirti. Kanaanis biyyattiifi lammileen ishee gaaga’ama siyaas dinagdee hamaaf saaxilamaniiru....	Read more »
Dhiirri ulfa baasuu ni danda’a moo hindanda’u ?
Macaafa qulqulluu Seera Uumaamaa 38: 8 – 10 “Yihuudaan yemmus Onaaiin, “gara haadha manaa obbooleessa keetii dhaqi barcuma isaa qajeelchi obbolleessa keefis sanyii kaasi!” jedhe. Onaan garuu sanyiin kan isaati akka hinjedhamne...	Read more »
Qoleen meeshaa waraanaa baatu; misoomaa akka hindaganne
Jaarsatu Waraana sagalee qabumoo sagalee hinqabne siif wayya jennaan lakki waraana sagalee maleessa naaf wayya jedhe jedhama. Waraana sagalee qabu maali? Kan meeshaa waraanaa deggarame jechuudha, isa kana fagootti dhagahanii dheessanii lama...	Read more »
Omisha gahe sassaabaa diinas qolachaa
Yeroo ammaa maniiwwan guguddoon afran misooma qonnaarratti wabii nyaataa mirkaneessuu, omishawwan alaa galan bakka buusuu, omishawwan alergii baay’inaafi qulqullinaan omishuufi carraa hojii uumuurratti qabamee sadarkaa biyyaatti xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Hojiin misooma qonnaarratti...	Read more »